Tsotra ny manala tsatsakaotra : Citron, vinaingitra, diloilo kôkô … no vahaolana !
Misy tsatsakaotra ny hoditrao. Tena feno azy ny hoditra manodidina ny fitombenana sy ny kibo, ny fe, ny nono, ny andilana…
Hoy ianao hoe, tsy ho afaka intsony izy ireo. Aza mbola manary toky, raha tsy efa nampiasa an’ireto paipaika atoronay anao ireto. Telo ny safidy ananana : voasarimakirana, “vinaigre de pomme”, na diloilo kôkô no vahaolana.
Hosory ranom-boasarimakirana atao manoritra boribory ireo faritra feno tsatsakaotra. Avelao hiasa sy hilona eo mandritra ny 10 minitra. Kobanina amin’ny rano matimaty avy eo. Hamainina, dia hosorana menaka manamandina.
Ataovy ao anaty tavoahangy fanaovana tsifitsifitra ny vinaingitra paoma. Ny alina mialoha ny hatory, dia atsifitsifitra eo amin’ireo tsatsakaotra ity vinaingitra ity, dia aleo ho main’ny rivotra ho azy eo. Ny maraina mifoha vao kobanina sy hamandinina amin’ny menaka mahazatra ny hoditrao.
Diloilo kôkô tsy mitapoka no ilainao. Ahosotra sady hanorana ny faritra misy tsatsakaotra isan’andro, indrindra fa amin’ny alina mialoha ny hatory. Hihena tsikelikely sady ho zara raha ho tazana ireo tsasakaotra.